James Swan: Xaaladda Amniga Ayaa Wali Ah Mid Laga Walaaco (Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
James Swan: Xaaladda Amniga Ayaa Wali Ah Mid Laga Walaaco (Warbixin)
On May 26, 2021 200 0
James Swan oo ah ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa khudbad dheer oo uu ka jeediyay shirka golaha amaanka kaga hadlay xaaladda DF iyo maamul goboleedyada isagoo dhanka kale aad uga walaacay weerarada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo joogto ah.
Waxa uu aad ugu dheeraaday ka hadalka khilaafaadyadii soo ragaadiyay DF iyo is mariwaaga doorashada la xariira ee ay haatan la daalaa dhacayso.
“Geedi socodka siyaasadeed ee lagu hirgalinayo doorashooyinka Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay la kulmay caqabado badan.
Wadahadalkii udhaxeeyey Dowlada Federaalka iyo hogaamiyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka oo bilowday bishii Maarso ayaa si nasiib daro ah u burburay horaantii bishii April. Golaha Baarlamaanka ayaa markaa kadib ansixiyay “Sharci Gaar ah” oo baabi’inaya heshiiskii doorashada ee 17-kii Sebtember, iyadoo dib loogu noqonayo qaab hal qof iyo hal cod ah, iyo in loo kordhiyo waqtiga howl-wadeennada xafiiska hadda jooga illaa laba sano oo dheeri ah. Ka soo horjeedka talaabooyinkan waxay keeneen abaabul maleeshiyo iyo kala qaybsanaan soo dhex gashay ciidamada DF dhexdooda. Isku dhacyo gacan ka hadal ah ayaa dhacay 25-kii Abriil.”ayuu yiri James Swan.
Wuxuu bogaadiyay natiijada ka dhalatay amar uu isagu bixiyay oo ahaa in Madaxweynaha uu ra’iisulwasaaraha siiyo wax badan oo kamid ah awoodiisa taasoo sida uu yiri xoogaa yareysay xasaradaha.
James Swan oo warbixintiisa u gudbinayay sida inuu isagu yahay madaxweynaha Df-ka oo kale ayaa ka hadlay kaalinta uu xafiiskiisu ku leeyahay shirka xerada Afisyooni ee u dhaxeeya madaxda DF iyo kuwa maamul goboleedyada.
“Kooxda Qaramada Midoobay waxay ka taageertay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha qabanqaabada shir madaxeedka, waxayna si weyn u bogaadiyeen tabarucaada deeq-bixiyeyaasha muhiimka ah ee arrintan ku saabsan. Ayuu yiri. Waxaana warkiisa uu waafaqayaa hadalka dhowr siyaasi oo saacadihii lasoo dhaafay sheegay in xataa biyaha ay cabayaan ka qeyb galayaasha shirka uu bixiyay xafiiska QM.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu farriin u diray madaxda DF iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana uu yiri: “Saxiixayaasha heshiiska 17-ka Sebtember waa inay hadda ballan-qaadaan waddo cad oo horay loogu qaadayo qabashada doorashooyinka.
Intaasi kadib wuxuu aad u xoojiyay mid kamid ah mabaadi’da dowladaha reer galbeedka oo ah in la fasaadiyo haweenka Soomaaliyeed:
“Marka la guda galayo doorashooyinka, waxaa muhiim ah in haweenka ay helaan boqolkiiba 30 ugu yaraan matalaada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ayuu yiri iyadoo aan og nahay in dalka uu isagu kasoo jeedo ee Mareykanka aaney waligeed madaxweyne ka noqon qof haweeney ah.
James Swan ayaa ugu dmabeyn wuxuu khudbaddiisa si dareen leh diiradda ugu saaray ammaanka iyo baqdinta ay ka qabaan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo iyagu ah cudud milatari oo diidan fara galinta iyo ku amar taaglaynta shisheeyaha.
“Xaaladda amniga ayaa weli ah mid laga walaaco. Al-Shabaab weli waa khatar weyn oo muujinaysa awoodda ay u leedahay qorsheynta iyo fulinta weerarada adag ee lala beegsanayo bartilmaameedyo kala duwan oo ku baahsan Soomaaliya. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxaa si faahfaahsan loogu sharaxay warbixintii ugu dambeysay ee Xoghayaha Guud. Waxaa kufilan in la dhaho Al-Shabaab waxay muujiyeen dadaal iyo adkeysi bilihii la soo dhaafay” ayuu ku calaacalay ergayga Qaramada Midoobay.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo ururada iyo dowladaha shisheeye ee dalka kusoo duulay ay siyaabo kala duwan u muujiyeen niyad-jab maadaama dhaqaalihii, ciidankii iyo hubkii ay muddada dheer bixinayeen ay ka dhaxleen natiijo la’aan, iney fadhiid noqdeen oo ay is-qabqabsanayaan maamuladii ay dhiseen iyo Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo horukac weyn sii sameeneysa.